Iimpuphu zeentlobo zamabhinqa kunye namantombazana: inkcazo yeentsimbi, ifoto, izicwangciso zabaqalayo kwiintambo
I-Sweatshirt yabasetyhini: umzobo, inkcazelo, ifoto
Ngamaxesha onke amabhinqa aye afuna ukuzihobisa, ngoko ukukhwabanisa kukudume kakhulu ngoku, naphezu kobuninzi kwiindawo zokugcina iimpahla ezahlukeneyo. Into yokuba yonke intombazana ifuna ukungafani nabanye. Iimpahla ezibophekileyo kunye neempahla zokugqoka zivumela ukuba ujabulele lo mvakalelo ngokupheleleyo. Ngaba ufuna ukufunda indlela yokuzibhinqa izitayela kunye neebhola? Funda yethu iqaku. Unemiqondo emininzi enomdla kunye neeklasi eziphambili.
Iifoto zibophe iifoto zabasetyhini
Unokubamba nayiphi na i-blouse kunye neenaliti zokudibanisa. Siza kukunika ingqalelo imizekelo enhle kwaye elula ehlobo.
Inzuzo ebaluleke kakhulu yendalo leyo yithuba lokugqoka kwiingubo ezicocekileyo nezesitayela ebusika. Imizekelo emihle yeebhakethi ezifudumele kunye neengxuma ziqokelelwa kwigalari yethu.
Indlela yokufumana abaqalayo
Ukuqala, sicebisa ukudibanisa i-sweater elula kakhulu, kodwa enhle. Iskimu siya kuqondakala nakwabasetyhini abangakaze bahlangabezane nenkqubo enzima njengento yokwenza iimpahla kwintsimbi. Kulo mfanekiso ubona umphumo ogqityiweyo.
Cinga ngamatye adibeneyo ngobukhulu 38-39. Sinikeza umyalelo olula ngeenkcazo. Unokwenza iipatheni ezintle zokubamba i-sweatshirt enjalo. Kodwa kubaqalayo ibhanti e-raber elula iya kwenza. Kubukeka buyi-stylish ngokudibeneyo kunye nemivimbo engapheliyo. Qala ukubopha i-blouse ngokubhekiselele kwidatha kwimifanekiso.
Kwi-backrest, ukudayela i-82 loops. Ukubopha ibhanti ye-elastic 5 imigqa emnyama. Emva koko utshintshe intsimbi kwi-grey. Xa udoti ufikelela ubude obungama-40 cm, yenza i-armhole. Ukunciphisa ngomgca ngamnye wesibini elinye ixesha lokuqala 4, emva kwe-3, 2 kwaye ekupheleni kwe-1 loop. I-20 cm elandelayo idibaniswe kumgca ochanekileyo. Emva koko uvale iinqununu. Kwi-shelf efanelekileyo, shayela ama-49 loops. Kwimitha yomsebenzi wama-38, qalisa ukunciphisa entanyeni. Emva kokuqala kweemitha ezili-18 zokuqala ukusika esinye isihlandlo ezili-10 kumqolo ngamnye wesibini. Kuphakame okufanayo njengemuva, vala u-19 loops kwaye udibanise kumgca ochanekileyo. Isalathisi sokunene sifana nesimo seglasi. Musa ukulibala ukwenza izicucu kwicala lasekunene. Ukwenza oku, uvale iingcezu ezili-10, kunye nomqolo olandelayo, ubahlawulele kwindawo enye. Kwikhohlo elingasekhohlo kukho amaqhosha, ngoko akufuneki ukwenza i-slits. Ngokuba iimpahla zeemikhono ziza kufuna ii-loops ezingama-37. Ukwandiswa kumgca ngamnye wesithandathu ungeze ikhefu enye. Yenza izihlandlo ezisibhozo. Xa ubude bomgca buyi 41 cm, qala ukuhla. Ukususela kwimida yecala ngalinye, unqumle umgca kulo myalelo olandelayo: iziqendu zokuqala-4, ke izihlandlo ezili-9 zihamba kunye kunye ekugqibeleni izihlandlo ezithandathu zibini. Ngoku unokuvala umqolo. Umkhono wesibini kufuneka uqhagamshelwe ngokwemigaqo efanayo. Ekugqibeleni, yenza idibano yemveliso. Musa ukulibala ukuthunga kumaqhosha amnyama amaninzi. Ungamangalisi ukuba iimpahla zeemikhono zide. Ijeyethi nje inesimo esinjalo. Kuhle ukuba amantombazana amancinci.
Inkcazelo ngesinyathelo-nge-nyathelo yentambo yeebhatyi: ividiyo
Amantombazana apheleleyo aya kuba nomdla kwiinkcaza zokuloba kweli candelo. Ijacket iya kuba yintliziyo kwaye ikwazi ukufihla zonke iimpazamo kumfanekiso. Imodeli ngokwayo imnandi kakhulu kwaye isitayela. Kuya kufana nobukhulu obungama-50. Iingxube zeli cwangciso zidibaniswe nezigqoko, kunye neengubo, kunye nee jeans.
Ukusebenza kudinga iisetyhula ukukhangela iinaliti kwinombolo 3. Uhlobo loops 100. Ukwazi kuya kwenziwa yindlela "Reglan". Ingqayi yentamo ithotshiwe kuphela ngeengqimba zobuso kumacala omabini. Ukuphakama kwayo kufuneka kube malunga no-5 cm. Isigaba esilandelayo kukudalwa kwe-raglan. Fometha imida emine ukusuka kumgca - lo ngumgca webar ngakwicala. Emva koko balale i-loops ezili-12, wenze ikhonkco. Ingqungquthela esilandelayo yi-purl. Qhubeka udibanisa ngale ndlela, ukwandisa inani leenkontila nge-12, 24 kunye ne-12 ngaphezulu. Ngomqolo olandelayo, yenza ikhonkco emva kweeopsti ezili-13 kwaye ke wongeza enye i-loop ukuze ufumane i-raglan. Xa i-tovas ifinyelela ubude be-21 cm, qalisa ukubopha umkhono omnye kuphela. Yongeza i-5 loops kwicala. Ukubopha iqela lobungakanani obuyimfuneko uze uvale i-knitting. Ngendlela efanayo, qhawula umgca wesibini, ngokwahlukileyo kwireferensi yokunene kunye nekhohlo. Emva koko qhagamshela zonke izinto. Kulo msebenzi unokuqwalaselwa ngokupheleleyo. Iibhatyi ezinjalo ezifashisayo ziyaziwayo kubo bonke abantombazana ngaphandle kokunye. Ngako oko, kuya kuba mnandi kubo ukubona inkcazo epheleleyo yeklasi kwividiyo.
Iimfashini ezinokufakeka, ezide kunye neenhle kwiintlobo zeenaliti
Ukuzifumana ngeenaliti zokudibanisa kuyinkqubo enomdla kwaye inenjongo. Uza kufunda ngokukhawuleza ukuba usebenze kunye nezicwangciso ukuba uyaziqhuba rhoqo. Siyakuchukumisa ezinye iinketho ezithandayo. Ukusebenzisa iskimu, ngokukhawuleza qhagamshela ama-sweaters amahle kuwo onke amaxesha. Sebenzisa intambo yokukhanya, kwaye ufumane iipatheni zasehlobo. Ufuna into efudumeleyo-ithenge iintambo zoboya.
I-blouse ekhangekileyo kakhulu iya kufumaneka xa usebenzisa icebo elinjalo. Akukho nto ilukhuni apha, kwanele ukwenza ukuqhubela phambili kwicala langaphambili ngexesha.
Eyaziwayo kwi-blouse yasehlobo-ngumlondolozi obaluleke kakhulu welanga nemimoya. Jonga umfanekiso olula wokufumana iipateni ezivulekileyo.
Enye inguqu yesivuno iya kubhenela abo bathanda ilayi. Kukho ii-nac ezininzi, ngoko ke iimveliso ezinamaqhina zenziwe i-lace kunye nokukhanya.
Iimfihlakalo zikagogo zikagogo zokukhanda izigubhu kunye neebhatyi
Akuyena wonke umntu unogogo othanda ukudibana, kodwa wonke umntu osweleyo ufuna ukufumana iingcebiso ezilungileyo zomsebenzi. Siza kubelana nawe ngeemfihlo ezimbalwa. Okokuqala, ngeengubo ezifuthiweyo kufuneka kube neyunifomu efanayo. Musa ukudibanisa imicu. Unokwenza nje ukudibanisa umbala onesibindi. Okwesibini, ngaphambi kokuba uqale umsebenzi, qhawula intambo ekhethiweyo kwintambo ekhethiweyo ngokwecwangciso. Ukulinganisa kwaye ubale inani leetops. Ngale ndlela kuya kunceda ukuba ungaphathi kakubi ubungakanani bomkhiqizo. Okwesithathu, qiniseka ukuba unamathele ngokuzonwabisa. Isiqhamo esithandabuzayo asiyi kuba kuhle njengoko senziwe ngomphefumlo.
I sweatshi yeentombi ezifudumalayo kunye nomzekelo wokubamba iinaliti
Iiglavu zamabhinqa azifudumayo kunye neenaliti zokudibanisa
I-scar-cat-cat nge-knitting needles
Umkhonto wokuqala webhola
I-Overalls eziza kutshatyalaliswa neenaliti zokudibanisa zabaqalayo
Yisuka kwisitya: isitayela esinomthi "wet" - umthamo-2016
Izambatho ezenziwe ngothuli lwendalo
Isonka sesonka kunye neerinki
Indlela yokujongana nezilwanyana ezinothuli
Ukwesaba ngesondo - apho ivela khona kunye nendlela yokuphumelela
Imini engcono kakhulu yomtshato ngo-2010
Yintoni elindele uLoyi ngo-2014
Indlela yokufundisa umntwana ukuba aphume?
Ikhwele leFirst French: ubuchule bokusebenza